Nadoboka am-ponja vonjimaika ao Ambatolampy ireo jiolahy nangalatr’omby nandrasana teny an-tanety sy ilay mpivarotra basy nentin’ireo malaso nanafika. Io ny fampitam-baovaon’ny zandary ao Antanifotsy tamin’ny tafa manokana omaly atoandro. Notsindrian’ity mpitandro filaminana ity fa tamin’ny zoma teo no niakatra teo amin’ny fampanoavan’ny Fitsarana Ambatolampy ny raharaha. Tsy misy ahiana kosa ny ain’ilay voatifitra.
Voasakana mantsy ny fikasan-dratsin'ireto dahalo roalahy izay nangalatra omby noho ny fiaraha-miasa matotra teo amin'ny zandary sy ny fokonolona. Tao Marovahoaka, fokontany Ambatolampikely, kaominina Ambatomiady, distrika Antanifotsy no niseho ny halatra. Omby roa nandrasan'ny tompony no nalain'ireo dahalo. Notifirin'izy ireo ilay mpiandry omby ka voa teo amin'ny tarehiny. Niantso ny zandary avy hatrany ny fokonolona ka tonga nijery ny zava-nisy ny zandary tao amin'ny “Poste fixe” Ambatomiady.
Natao ny fanarahan-dia niarahana tamin'ny fokonolona ka tsy lasa lavitra akory dia tratra ireo olon-dratsy. Tratra teny aminy niaraka tamin'ny omby roa nangalariny ny basy “pistolet” vita gasy sy ny bala “chevrotine calibre 12”, efa nipoaka ny iray izay nitifirany ilay mpiandry omby. Voasambotra ihany koa ny olona fahatelo izay nividianana ilay basy.